Psykôpasy • rapgasy.mg
Mpanankanto miangaly RAP, mpanoratra, mpitendry sy mpamorona
Psykôpasy, teraka tao Iarivo ny faha 22 ny volana desambra 1980, dia nanomboka nahafantatra sy tara tamin’ny kolon-tsaina HIP HOP ny taona 1994.
Tamin’izany no namoronana ny tarika Mas Donaka na Master Heat niaraka tamin’i Sool, Pika, Aina, Ziggle ary Papi. Taona vitsivitsy tao ahorian’izany dia teraka ny X CREW, izay vondrona tarika maromaro avy eny Atsimondrano, fantatry ny mpankafy tamin’ny fiangaliana ny gadona hardcore sy noho ireo lahateniny mahitsy sy mahatonga saina.
Ankehitriny Psykôpasy dia ao anatin’ny tarika Sapienz miaraka amin’i Boska sy Tasnapisy sady miasa ao anatin’i Label Mas Madagascar.
Ny drafitra manokana an’i Psykôpasy dia niatomboka tamin’ny taona 2005 teo anilan’ i Sakura sy Sanga (background vocal) ary i DJ Natty Jay.
Nandray anjara tamin’ny hetsika maromaro izy mandra-pivoakan’ny raki-kira voalohany tamin’ny taona 2007, nitondra ny lohateny hoe : » Voambolana aman’Alina » izay notontosaina sy novokarin’i Grave Studio. Nisy fiaraha-miasa tamin’ny tarika sahala amin’i Fefiloha sy ireo hafa maro samihafa izay nitovy firehana sy fomba fijery taminy.
Nande ny taona ary niabetsaka ny mpakafy satria nia nipetraka teo anivon’ny be sy ny maro ny fankafizana ny gadona Hardcore. Ny asa soratra sy ny laha-teny noventesiny dia niompana tamin’ny zava-niseho teo amin’ny fiaraha-monina, mahitsy izany ary naka endrika fitolomana. Nisy ihany koa ireo diam-penina nitantara ny fiainany manokana.
Tamin’ny volana septambra 2013 no nivoaka ny raki-kira faha-2 « Lalana Fiainana sy Fahamarinana » izay noketrehana niaraka tamin’ i Label Mas Madagascar ary noraisina feo sy nokarakaraina tao amin’i Nada Studio.
22 taona sahady izao no niainany an’izany kolo-tsaina HIP HOP izany anefa mbola mitohy ny lalana satria ny faniriany dia ny hitondra Avo izany kolo-tsain’ny Ara-be izany, ary ity raki-kira ity dia fanohizana ny hezaka sy ny herim-po natontona hatramin’izay ho an’ny rap gasy sy ny mpankafy azy.
Fisaorana mitafotafo ho anareo mpanaraka tsy tapaka, mpanohana sy mpakafy
Iza moa izany hoe Nephesch TA’AN, dia inona ny tantarany? Izaho dia...
Album Fandriampahalemana... Album de PSYKOPASY contenant 14 titres Enregisté, mi...
Affichage du Contenu en 1,529,501,469.576 seconde(s) avec 90 requêtes SQL